Ismaandhaafka doorashada Jubbaland halkuu ku biya shuban doonaa? - BBC News Somali
"Shan bilood iyo dheeraad buu magacaawnaa (golaha), intaa wadahadal baan kula jirnay inuu maamulka hadda jiro hal musharrax uu ololeeye u noqdo, waan ka kari weynay dabadeedna bulshada Jubaland ayaa go'aansatay iney sameystaan Guddigayaga," ayuu yiri.
Guddoomiyaha guddiga ka dhisan Muqdisho, Axmed Aabi, oo BBC Somali ay weydiisay waxa uu liiskooda ugu soo aaday midka xalay laga shaaciyay Kismaayo? wuxuu ku wajaawabay: "Maya, Anagu Fowdo ma wadno anagu xal oo dhan miiska ayuu nag saranyahay fursad kasta miiska ayuu naga saran yahay; wadahadal ha la isugu yimado waan oggol nahay ma diideyno. Xoog ma isticmaaleyno dimuqraadiyad baanu dooneynaa, doorasho dadka u dhaxeysa oo xalaal ah baan dooneynaa."
Maxamed Nuur Caalin ayaa qabo in xalka lagu celiyo shacabka "isbarbar yaaca siyaasadeedna la iska daayo".
"Doorashadii Koonfur galbeed cabashadii taagneyd baa tan Jubalandna taagan," ayuu hadalka ku daray Caalin oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Warqaddaas wasaaradda ka hor, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamsa Cabdi oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in "odayaasha dhaqanka beelaha ay u soo gudbiyeen min saddex xubnood oo musharixiinta xildhibaanada ah," kuwaas oo laga sii dhex xushay qofka noqonaya xildhibaanka.
Foos Cali Cabdiraxman oo ah gabar da'yar ah oo aheyd suxufiyad, ayaa ka mid noqotay xildhibaanada baarlamaanka Jubaland, waxay BBC u sheegtay in "aad ay ugu faraxsan tahay in ay ka mid noqoto baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland".
"Markii hore qof rag ah ayaa beesheyda ku matalayey, haddana waxay beesheyda ii garatay xuquuqda dumarka si loo helo iney kursigaas aniga ii soo xushaan," ayey tiri.
"Waxaan sida oo kale ku faraxsanahay qoondadii dumarka ee ay ku leeyihiin baarlamaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ah 15% iney wada heleen taasina aad baan ugu faraxsanahay".